Drake ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလေးကမှထွက်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ သီချင်းအသစ် “Nice for What” MTV မှာ A-listed model လေးတွေနဲ့ပုံဖော်ထားခဲ့တာကြောင့် လူတွေရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုသိမ်းကြုံးယူထားခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ပြောပြောနေကြတဲ့ A-listed model လေးတွေထဲမှာ ဘယ်သူတွေပါလဲကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။ Issa Rae, Yara Shahidi, Tiffany Haddish, Ballerina Misty Copeland, Rashida Jones, Jourdan Dunn, Letitia Wright, Michelle Rodriguez, Emma Roberts နဲ့ အဆိုတော် Syd တို့အပါအဝင် အယောက် ၂၀ လောက်ရှိတယ်တဲ့ ? အများစုဟာနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ သရုပ်ဆောင်နဲ့ အဆိုတော်တွေဖြစ်ကြပြီး Black Panther ထဲကမင်းသမီး Letitia Wright တောင်ပါထားတာနော်။
“You gotta be nice for what to these???”?
A celebration for phenomenal women. pic.twitter.com/feQCznGmis
— Letitia Wright (@letitiawright) April 7, 2018
Drake အနေနဲ့ သူရွေးချယ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ သူတွေဟာ သူတကယ်ကိုလေးစားပြီးအားကျရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားခဲ့ပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေကလည်း Drake ရဲ့ ဒီသီချင်း “Nice for What” မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရလို့ ကျေနပ်ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ အပြန်အလှန်ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်နေခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီသီချင်း “Nice for What” ဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုယ်စားပြုဆိုထားတယ်လို့ထင်ကြေးပေးခံနေရပြီး Beyonce ရဲ့ “All the Single Ladies” ရဲ့ version တစ်မျိုးလို့လဲ ပြောနေကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီသီချင်းရဲ့ စာသားတွေဟာ ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာ အမျိုးသမီးထုကြီးတွေသုံးကြမယ့် Instagram Caption တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လဲ ခန့်မှန်းနေကြပါပြီ။ (တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လေ ?)
ကဲ “Nice for What” မှာဘာတွေဆိုထားပြီး ဘာတွေချေထားလဲဆိုတာ ကြည့်သွားလိုက်ပါဦးနော်။ (ဒီ MTV ကိုရိုက်ထားတဲ့ဒါရိုက်တာက အသက် ၂၂ နှစ်ပဲရှိသေးတာတဲ့ လုံးဝမပေါဘူးနော် Skill ကိုရှိုးသွားလိုက်ဦး?)
PREVIOUS POST Previous post: GiGi နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပုံတွေတင်မက သူ့ရဲ့ Instagram ပုံတွေအားလုံးကိုပါ Delete လိုက်တဲ့ Zayn
NEXT POST Next post: Cardi B ဆိုတာဘယ်သူလဲ??